Sacuudiga oo dalkeeda ka Erisay safiirlka Canada in u fadhiya magaalada Riyaad | allsaaxo online
Sacuudiga oo dalkeeda ka Erisay safiirlka Canada in u fadhiya magaalada Riyaad
Boqortooyada sacuudiga ayaa dalkeeda ka erisay safiirka Canada u fadhiya magaalada Riyaad oo lagu eedeyay in uu fara galin ku sameeyay arimaha boqortooyada oo ku aadan ka hadalka shaqsiyaad ay dowlada sacuudiga ugu xukuntay xabsiyo,sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaarada Arimaha dibeda sacuudiga.
Safiirka Canada Dennis Horak ayaa la siiyay in mudo 24 saac gudahood ah uu uga baxo sacuudiga sida ay warisay maanta oo isniin ah wakaalada wararka sacuudiga ee Saudi Press Agency (SPA).
Warsaxafadeedkan ayaa imaaanaya maalmo kadib markii dowlada Canada ay sacuudiga ugu baaqday in ay sii deyso shaqsiyaad u ololeeya xuquuqda aadanaha oo la xiray bilihii la soo dhaafay oo ay ku Jiraan Qaraabada muwaadiniin u dhalatay Canada.
Warka ka soo baxay maanta sacuudiga ayaa sidoo kale lagu hakiyay heshiisyo Ganacsi oo labada dal horay u saxiixdeen kaasi oo ay ku kaceyso malaayiin dolarka mareykanka.
Wasaarada Arimaha dibeda sacuudiga ayaa sheegtay in ficilada Canada ay sameysay ay jawaab u tahay talaabada ay qaaday maanta,iyadoo sacuudiga uusan aqbali doonin fara galin kasta oo kaga timaada dalal ka dibeda.
Shaqaalaha safaarada Canada ee ku sugan magaalada Riyaad oo arintaan wax laga weydiiyay ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan.
Balse todobaadkii hore ayey aheyd markii safiirka Canada u fadhiya sacuudiga uu sheegay in uu ka walaacsan yahay xariga shaqsiyaad u ololeeya xuquuqda aadanaha oo bilihii la soo dhaafay ay dowlada sacuudiga xabsiga dhigtay.